संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति – कर्णाली 24 डट कम
Karnali 24११ असार २०७८, शुक्रबार ०९:५५
काठमाडौं, असार ११ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा २० जनालाई नियुक्त गरेकी छन्। संवैधानिक परिषद्को वैशाख २६ गते बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्त गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा झापाका माधवप्रसाद रेग्मी र सदस्यहरूमा माधव बेल्वासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जुकुमारीलाई नियुक्त गरेकी छन्। त्यस्तै, उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ तथा निर्वाचन आयोगमा सगुनशमशेर जंगबहादुर राणालाई आयुक्त नियुक्त गरेकी छन्।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमल्सेनालाई नियुक्त गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि सदस्यहरू नियुक्त भएका छन्। नागरिक दैनिकबाट
अचम्मै !! लागेन ?? वाग्लुङमा २० रुपैयाँ तिरेर विश्वकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल तर्नेहरुको घुईंचो।
८ बैशाख २०७८, बुधबार १७:००
जुकालाई टोकाएर यसरी निको पारिन्छ
३० चैत्र २०७७, सोमबार १४:०८
काठमाडौँ उपत्यकामा २१६ सहित देशभर ६३४ नयाँ सङ्क्रमित थपिए
६ भाद्र २०७७, शनिबार २२:०४
जहाजभित्रै वेहाेस र रूवाबासी गरेका यात्रु सुरक्षित अवतरण भएपछि (भिडियाे सहित) ११ असार २०७८, शुक्रबार ०९:५५
यिनै हुन् बुद्ध एयरको जहाजलाई ठुलो दु’र्घटनाबाट जोगाएर ७७ जनाको ज्यान बचाउने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पा सम्मान स्वरुप सेयर गरौ।।(भिडियो सहित) ११ असार २०७८, शुक्रबार ०९:५५
भर्खरै विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जाहाज ल्यान्ड हुन नसकेर पुनः काठमाडौंमा फर्कंदै ११ असार २०७८, शुक्रबार ०९:५५